युएईलाई हराउँदै नेपाल दुई खेलअघि नै सेमिफाइनल प्रवेश ! - Koshi Online
युएईलाई हराउँदै नेपाल दुई खेलअघि नै सेमिफाइनल प्रवेश !
थाइल्याण्डमा जारी महिला टी–२० स्म्यास क्रिकेटको तेस्रो खेलमा नेपालले जित निकालेको छ । सोमबार भएको सो खेलमा बलियो टोली मानिने युएइलाई हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
नेपालले युएईलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जितसहित सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । बैंककमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित २० ओभर खेल्दै ६ विकेट गुमाएर १ सय ५ रन बनायो ।
बलिङमा नेपालकी सोनु खड्का, सीता राना मगर र करुणा भण्डारीले एक एक विकेट लिईन् ।
१ सय ६ रनको विजयी लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिएको नेपालले १९ ओभरमा मात्र ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेपालको जितमा ओपनर सीता राना मगरले ३७ रन जोडिन् । यस्तै काजल श्रेष्ठले २५ रन जोड्दा इन्दु बर्माले १३ रन बनाईन् ।
यस जितसँगै एक खेलअगावै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको नेपालले ३ खेलबाट ६ अंक जोडेको छ । अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार थाइल्याण्डसँग खेल्नेछ ।
यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा शनिबार चीनलाई १० विकेटले हराएको थियो भने आइतबार भएको दोस्रो खेलमा मलेसियालाई छ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
एम्बाप्पेले पीएसजी छाड्ने हल्ला मात्रै !
म्याराडोनाको चिन्ता ‘मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिना कमजोर’
विश्वकप क्रिकेटः वेष्ट इन्डिजमाथि बंगलादेशको एतिहासिक जित